- မိမိစိတ်ထဲမှာ ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို စာရွက်ပေါ်မှာ ချရေးလိုက်ပါ။ မိမိစိတ်ကို ဒုက္ခအပေးဆုံးက ဘယ်ပြဿနာလဲဆိုတာကို နံပါတ်စဉ်တပ်ပြီး ရွေးထုတ်လိုက်ပါ။ အနှောင့်အယှက် အပေးဆုံး ပြဿနာကို အရင်ဆုံး ရှင်းလို့မရရင် နောက်ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းကြည့်ပါ။ အဲဒီလို ပြဿနာတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြေရှင်းရင်းနဲ့ ဘယ်ပြဿနာကမှ ထင်သလောက် အရေးမကြီးတာကို သိလာလိမ့်မယ်။ မိမိစိတ်က ပြဿနာ တစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားလို့သာ ပြဿနာ ဖြစ်နေတာပါလား။ ပြဿနာ ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာလည်း စာရွက်ပေါ်မှာ ချရေးထားတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနေရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ စိတ်ထဲဝင်လာတဲ့ စိတ်တွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်တိုက် ဖြေရှင်းနေရတာပါလား! ၀င်လာတဲ့အာရုံတွေကို လက်ခံမိနေလို့ ပြဿနာ ဖြစ်နေတာပါလား! မိမိစိတ်ကို ဒုက္ခပေးနေတာ မိမိတွေးနေတဲ့ အတွေးကြောင့်ပါလား! စိတ်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး ၀င်လာတဲ့စိတ်တွေကို ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ဖြတ်တောက်နိုင်နေရင် ပြဿနာစိတ် ဖြစ်ခွင့်မရပါလား! ဆိုတာတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်။ မသေမချင်း နောက်ထပ်ရောက်လာဦးမယ့် ပြဿနာတွေကိုပါ ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ အသိဉာဏ်တွေကို စာရွက်ပေါ်က တစ်ဆင့် ရလာလိမ့်မယ်။ စာရေးဆရာတွေဟာ သူတို့စိတ်ထဲ ရောက်လာတဲ့ ပြဿနာတွေကို စာရွက်ပေါ်မှာ ချရေးပြီး ဖြေရှင်းနေကြတာပဲ။
- မိမိအတွက် အကျိုးဖြစ်စေမယ့် အလုပ်တစ်ခုကို အကြံအဖန်လုပ်ပြီး ရအောင် လှည့်ပတ်ယူတတ်တဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- လိုချင်တာတွေ သိမ်းကျုံးယူထားလို့ လက်နှစ်ဖက်လုံးမှာလည်း အပြည့်၊ ထည့်စရာအိတ်ထဲမှာလည်း အပြည့်၊ ပါးစပ်ထဲမှာလည်း အပြည့်၊ ဒါတောင် အားမရသေးဘဲ ကျန်တဲ့ဟာလည်း ယူဦးမယ်ဆိုပြီး လောဘမျက်လုံးနဲ့ လှမ်းကြည့်နေတဲ့စိတ်။
- စားပြီးသား လက်ကျန်အစာတွေကို ပါးစောင်ထဲက ထုတ်ပြီး ပြန်စားနေတဲ့ စိတ်သဘော။ ဘယ်လိုမှ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ ဖြစ်ပြီးသား ဒုက္ခအကြောင်းအရာအဟောင်းတွေကို ပြန်တွေးပြီး ဒုက္ခအသစ် ပြန်ဖြစ်အောင် ဖော်ထုတ်နေတဲ့ စိတ်အဓိပ္ပာယ်။
- မိမိ ဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲဆိုတာရယ်၊ တကယ်ဖြစ်ချင်တာရော ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ မိမိကိုယ်မိမိ စိစစ်စူးစမ်းရမယ်။
ဖြစ်ချင်တာ သေချာတယ်ဆိုရင် ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းကို စီကာပတ်ကုံး စ-လယ်-ဆုံး တစ်ခုမကျန် အသေးစိတ် လေ့လာ ရှာဖွေသင်ယူရမယ်။ ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကို အတိအကျ သိပြီဆိုရင် သီအိုရီနဲ့ လက်တွေ့ ပူးပေါင်းပြီး စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ အသုံးချတဲ့ စိတ်အနေအထား။
- ကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခု လုပ်တဲ့နေရာမှာ ခိုင်းတဲ့သူနဲ့ လုပ်တဲ့သူ ဘယ်ဟာက ပိုခက်မလဲ? ခိုင်းတဲ့သူက ဒါလုပ်ဆိုရင် လုပ်တဲ့သူက ခိုင်းတာလုပ်လိုက်ရင် သူ့တာဝန်ကျေပြီ။ ခိုင်းတဲ့သူကသာ ခိုင်းတတ်မှ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာပြီးအောင် ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လိုခိုင်းရမယ်။ အချိန်ကုန်သွားတာနဲ့ညီအောင် အလုပ်တွေပြီးနေရမယ်။ အလဟဿဆိုတဲ့ အလေအလွင့်မျိုး ဘယ်နေရာမှာမှ မရှိအောင် စီမံခန့်ခွဲတတ်ရမယ်။ ဒီလို စီမံခန့်ခွဲတတ်တာဟာ အလုပ်သဘောကို ကျွမ်းကျင်နေတဲ့သူရဲ့ စိတ် အရည်အချင်းပဲ။
- စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ အလုပ်သဘောအရ စိတ်ကို အသုံးချပြီး အားထုတ်တဲ့ စိတ်အဓိပ္ပာယ်။